Short Sviro Story:Yakazopinda yose munaTendai – VanodaZvinhu
Short Sviro Story:Yakazopinda yose munaTendai
by DrSviro · November 7, 2015
Ndichingosvika paTurnoff yekuenda kuMine kwandaishanda zvangu ndichibva muGweru apa dzatove kuma7pm dhuma dhuma nechimwe chimoko chakanaka zvekuoneka even murima apa chaitaura nevamwe mai vaitodawo zvavo kukwira kuenda Byo. Ndakangototanga nekudyira pastructure nevoice ndikati apa paita zvemwana. Ndakatanga ndirikure naye, but her voice heaved me closer to her. Mai vaya pavakangokwira kuenda ndikati zvaita.
Ndakaswedera paari ndikati, “nhai sisi monzi ani”, akati neinzwi riya rine sugar: “Tendai”. Ndikati ndatenda hangu kuti uripo mwana iwe. Chakasekerera kkkkkkk. Takamirira transport paturnoff paye ingawanikwe apa it was a distance of about 11km from turn off to Mine. Tikawirirana kufamba mbijana mbijana zvedu kusvika pataizowana mota muroad. Pose apa pataifamba mboro yangu yange yatoita chipikiri kare kumira ndikati zvekucharamba ndichida kunyenga tingatozosvika kuMine pasina yatambika. Chinono chine asina nyere ane nyere anosvira asina kunyenga zvakanyanya.
Takati tave pa2km peg from turnoff ini ndokureducer space btwn me & her zvekuti tange tofamba maoko angu achingogumha-gumha magaro aTendai wanei mboro yangu haikona mani. Yangu inozonyanyawo hayas. Ndakangoerekana ndatobata ruoko rwake ndokumuti shaa ndaneta ini ngatimbomira, iye ndokuti hande kani zvenhema ndichitoona kuti inogona kumwa chete. Chokwadi handina kana kumbomupfimba ini asi ndakatongoona ndotomukissa kubva pamuromo ndichidzika nehuro yake kuenda paguvhu asi akamboramba kutendera muromo wangu kuenda kubeche ndikati no problem rega ndishandire pa territory yangu yandapiwa ndozopiwa promotion kana ndagona basa.
Ndakaramba ndichimutsvoda kubva pamuromo, munzeve, mumaziso, mumhino, kuyamwa “mukaka” mazamo kusvika kun’un’una guvhu ndiye waya waya pabeche wanei mwana ongoyuwira takamira mutara “tarred road” yekuenda kuMine kwedu. Ange ongoti iwe kani aaa iwe mhani usadero kani yuwii kani mira mhani, panosvika mota tikaonekwa kani mira kani. Izvi ndizvo zvakatoita catalyst pakuwedzera kumira kwemboro yangu apa yange yotobuda tumuto mberi kwayo nekuti yanguwo haitodi zveopposition mumaactions zvachose.
Ndakamubata kabeans apa mhata yose yangove mvura apera basa kare. Ini ruoko rweleft ruri pabeche, rweright rurikuvhiura zip yetrouse rangu, takamira mutara imomo tumasaga twegrocery kwakadero uko kwitikwiti kure kuti tinyatsoshanda. Ndakamudambura pent yake gaaaa (kukurura ndikati too late) iye ndokuti aaa iwe kani wadambura pent yangu kani miraaaa yuwii kani miraa kani iwe unoiteiko ini nzeve dzatodzivira kare. Ndichingopedza kudambura ndakatozonzwa yatorumwa nebeche kare but kuti iende yose mukati ingada, mwana aitove virgin hake, ndikati ndorima gombo ndichakohwa parefu. Ndakatomboti asi ndaisa kuchimamiso kanhi kuomarara kudai izvo maiva mubeche chaimo kungoti Tendai ange asati ambosvirwa wena. Ndakakwizira pamuromo webeche ipapo iye achiramba ramba kudero musoro chete ndiwo waingokwesha kutsvaga kuvhura apa yotosvuuka asi kana kumbozvinzwa ndakatundira pamuromo ipapo ndokumbotonhorera for just few minutes tikambofamba asi aingoridza tutsamwa twenhema ndikati kuzoona tosvika kuMine ndinotovhura chete.
Haiwawo kwaingova kufamba asi ndaingoti handidi kuona mota inoenda kuMine ichiuya coz tingazokwira akazoramba kuenda neni kumba kwangu. Tisu avo tichibatana batana muroad imomo tasvika hedu pa6km peg, ndatangana naye futi heavy. Akangoshamisika achiona ndotsveta grocery ndikati ndaneta ngatimbozorora futi. Ndakaerekana ndamukisser akarivara ndakaona maziso ake achipinduka nenyere ndikati uyu ndomusvirisa chete. Ndakabudisa zamo rake rekuleft nechekuzasi kweblouse rake ndikariyamwa iye ndokunakirwa ndakaona ondipa ega rekuright asisanzwisisi rinonaka kuti nderipi ndikati zvangu zvauya. Ndakamuyamwa mazamo ndongoona achidhonzerera musoro wangu kuzasi kuguvhu ndikaziva kuti mwana anakwa nekudyiwa beche ndiko kwaari kuda kuti ndisvike futi.
Ndakamudhonza matinji nerurimi papent yadambuka iyoyo akabowa semukono wemombe wasvika pakaurairwa imwe. Ongoti yohweee kani iwe kani chisvira hako zvipere zvaunoda zvacho aaaa iwe kani asi wondirwadzisazveee here kaniii. Ndikati nechomuoyo handinatsitsi pabeche ini. Nguva yose ndaingofamba zip isina kuvharwa apamboro ichishwinya nekusvuuka kwayange yaita asi payakadzoka kuita chipikiri kumira kana kumbonzwa any pain. Tendai zvekurariswa aisada saka ndaingoipinza takamira saka yange isinganyatsi kumwa zvakanaka iniwo nekugarisa kwangu ndaitokasira kutunda ndisati ndaboora virgin irori. Ndakaipinza ikatadzazve kuvhura ndikawetera pamuromo webeche rake. Tikafamba zvakare shungu dzekuboora dzizere mumusoro.
Takafamba apa iye haachanyatsi kufamba nekurwadziwa. Hepano tasvika pa10 km peg from turn off kwasara 1km kuti tisvike paMine, ndikati ndikatadza kumuvhura pano hameno kuti ndichamuwanepi futi coz iye aiti aizoda kudzokera kuKwekwe mangwana acho aona sisi vake paMine. Sezvineiwo takaona rimwe zishiri kuti nditi ishiri rudzii muroad ndakatadza kuiziva nekuti range rave rima mwedzi watonyura. Tendai akabvunda zvisingaite achiwira pachifuva changu ndikati “advantage”. Ndokumuvhara ndikati shaa kutangira pano panotoshungurudza pakafira vanhu necar accident ngatibude muroad. Iye angarambe amboona zishiri kudero. Zishiri rakandibatsirawo irero. Ndisu avo neimwe nzira yandaiziva kuti inopinda nemusango tande takananga kuMine. Takambonyanyoenda kure here apa hana yemwana ichingorova nekutya ndikati apa ndipo pondotoboora chete achiri mukutya kudero.
Takasvika pane kamwe karuware ndikati shaa ngatizorore kekupedzisira ndaneta. Angarambe nekutya ikoko, ndiye go pasi akati kwati kwati neni kana kuchambonzwa kubaiwa nemboro yangu kumusana wake kana. Ndakatanga kumuromancer heavy zvino ndange ndavekumberi manje Final play – “win or lose”. Ndakamubata akadikitira ndikabvisa blouse ndikamwa mazamo ake ose achingoti maiwee kani mhamha kani , ndichingomwa, ndikamukokota munzeve, kukisser mhuno, muhapwa ruoko ruchanetsei kubata beche apa pent ndadamura kare, kubata beche nekutsukuta tsukuta kabeans ndikaziva kuti ndikaita dzungu rekumhanya kuda kusvira handingaboori better ndimbotanga ndamuromencer kusvika ave paralysed ndozoita walkover.
Ndakamusvisvina beche kusvika iye oti chiisa hako kani ini ndichiwedzera kuramba sendisingadi izvo ndateya kuboora. Iye ange ongoti yowee kani chiisa kani svira hakoo apa ave kuverenga nyeredzi mudenga akarara kuti rabada. Vehama kuita zvestyle kutendedzwa uye nguva. Ini gadha pamusoro. Ndokubva ndaiti pamurowo webeche ndoo ingabvume kupinda, ndikati maybe ndichiri paZIF (Zero Insertion Force) ndokuwedzera power ndakanzwa kuti wii wii mbijana mbijana iye achisunga makumbo ndokuzonzwa yakarumwa nebeche kuita kutsunywa mwana zvino oridza mhere ndikati hameno kana vekuMine vakanzwa ini my focus is now fully on kuboora chete. Payakasvika pahalf way ndakabva ndaziva kuti ndatoboora apa ropa ndaitorinzwa kutoterera patrouse rangu kare coz ndakarikurura halfway.
Ndakawedzera force ikazoti yose wiii wanei mwana yangove mhere apa maziso seembudzi yadimburwa musoro. Kunakirwa kwainge kwasangana nekurwadziwa asisazive zvekuita ndikabva ndakoira zvemberi mubeche rakasunga kudero. Tendai ongoti mhamha kani yowee kani wandikuvadzaa. Ini ndichida kuchinzwa chimoko ndikati ndobvisa here chikati haiwawo watondikuvadza kare kani. Pandakaita sekuda kubvisa chakasimukira kuiteverera ndikati zvino ndapirwa mashavi ekukoira. Tendai ndakamusvira yose kuti svata akazondipedza paakatunda paruware paye ange ongoti yuwii kani daddy kani isa hakoo ikunaka kani hey mboro inonaka kudai here ndokuda ini handidzokeri mangwana ini kani isaaaaaaa.
Mabvi nemagokora angu akasvuuka asi ndakatozozviona ndave kumba kuti ndasvuuka. Handirambe ndakambosvira zvangu vamwe vasikana asi Tendai handimukanganwi upenyu hwangu hwose anonaka ummmmm, iye kana akaverenga nyaya ino ngaanditsvage paFacebook tinozivana chero akawanikwa totodzokerana. Yakazopinda yose muna Tendai virgin.
by DrSviro · Published July 20, 2015
by DrSviro · Published May 10, 2016
Today’s position mubedhurumu
by DrSviro · Published November 25, 2014
Next story Makwirirwo andakazoitwa na Sekai!
Previous story Short Sviro Story: Handichaita zvemagrup